अचानक पुसमा नै गर्मी किन बढ्यो ? « Etajakhabar
अघिल्लो सातासम्म दिउँसो पनि चिसो हुन्थ्यो । शनिबारयता भने सर्वसाधरणले तातो महसुस गर्न थालेका छन् । आइतबार दिउँसोसमेत राजधानीमा धेरेले गर्मी महसुस गरे । आइतबार राजधानीको अधिकतम तापक्रम २३ डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भयो । शनिबारको तापक्रम २२.४ डिग्री सेल्सियस थियो । अधिकतम तापक्रम ह्वात्तै बढेपछि यस्तो अनुभव भएको हो ।
गर्मी मौसममा पसिना आउनु स्वभाविक हो र यो स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पनि मानिन्छ । तर बढी पसिना आउने मानिसलाई डिहाइड्रेसन या नुनको कमी हुने जस्ता समस्या निम्तन सक्छ । धेरै पसिना आउनु कुनै स्वास्थ्य समस्या नभएपनि पसिनाको ग्रन्थीमा गडबडी, तनाव, हार्मोनमा गडबडी, बढी मसाला भएको खाना, बढी औषधि सेवन,मौसम तथा मोटोपनाका कारण हुन सक्छ । बढी पसिना आउने स्थितिलाई ‘हाइपरहाइड्रोसिस’ भनिन्छ।
शरीरमा तापमान नियन्त्रित राख्नका लागि शरीरमा पसिना आउनु जरुरी मानिन्छ । हाम्रो शरीरको तापमान ९८.६ डिग्री फरेनहाइट हुनुपर्छ । यसलाइ सन्तुलनमा राख्न शरीरमा २५ लाख पसिनाका ग्रन्थी हुन्छन् । यी ग्रन्थीले एयरकन्डिसनिङको काम गर्छन् । बाहिरी कारण होस् या खानपान, तातो बढेपछि शरीर चिसो बनाउन यी ग्रन्थीबाट पसिना निक्लन सुरु गर्छन् । पसिना हावामा सुकेपछि शरीरको तापमान कम हुन्छ।
किन हुन्छ हाइपरहाइड्रोसिस ?
हाइपरहाइड्रोसिस स्नायु प्रणालीसंग सम्बन्धित एक सामान्य गडबडी हो । यसलाई तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ– स्नायु प्रणाली, भावनात्मक या हार्मोनल गडबडी या बहिरी वातावरण । यो समस्याबाट पीडित व्यक्तिका पसिना ग्रन्थी बढी सक्रिय हुने हुनाले बढी पसिना आउछ । करिब ८ प्रतिशत भारतीय बढी पसिना आउने समस्याबाट पीडित भएको पाइएको छ।
हात या पैतालामा बढी पसिना आउने समस्यालाई ‘पाल्मोप्लोटर हाइपरहाइड्रोसिस’ भनिन्छ । यसको लक्षण सानो उमेरमै देखिन्छ । यसमा शरीर चिसो बनाउने प्रक्रिया धेरै नै सक्रिय हुन्छ।
मुटुसम्बन्धी समस्याको संकेत
कुनै कामविना नै बढी पसिना आउनु मुटु रोगको पूर्वसंकेत हुन सक्छ । यसअनुसार अवरुद्ध धमनीले मुटुमा पम्प गर्न बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ । जसका कारण बढी पसिना आउछ । यदि बढी पसिना आउछ र छाला बढी च्यापच्याप भएको महसुस हुन्छ भने तत्काल चिकित्सकसंग परामर्श लिनुपर्छ।
सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ
बढी पसिना आउने समस्या छ भने सरसफाईमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । यसबाट बढी पसिना आउनबाट धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । व्यक्तिगत सरसफाई कायम राख्नाले छालाको संक्रमण र समस्याबाट पनि बँच्न सकिन्छ।
दिनहुँ एक कप गोलभेंडाको जुस सेवन गर्नाले बढी पसिना आउने समस्याबाट राहत मिल्छ । यसका अलावा ग्रीन टी नियमित रुपमा पिउनाले स्वास्थ्य राम्रो हुनुका साथै पसिनालाई पनि नियन्त्रित गर्छ। पानी बढी पिउनाले पसिनाको दुर्गन्धबाट छुटकारा मिल्छ । स्ट्रबेरी, अंगुर, बदामजस्ता फलफूलमा सिलिकन बढी हुनाले पसिना पनि धेरै बन्छ ।
यस्ता उपाय अपनाएर बढी पसिना आउने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर पनि कम भएन भने चिकित्सकसंग सम्पर्क गर्नुपर्छ ।